ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံး All-Inclusive Resorts | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံး All-Inclusive Resorts
ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံး All-Inclusive Resorts
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
တစ်အားလပ်ရက်စီစဉ် ဥရောပတိုက်တွင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အချိန်ကြာနိုင်. အဆိုပါစေ့စပ်ခရီးသွားများအတွက်, အဲဒါကိုသိသာအချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုင် သုတေသန ခရီးသွားများ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်နေဖို့နေရာတစ်နေရာကောက်. သင်တို့ရှိသမျှသည်-အားလုံးပါဝင်နိုင်သို့မဟုတ်မသွားသင့်? သင်မည်သို့ရှိရမယ့်, အားဖြင့် ရထားသို့မဟုတ်လေယာဉ်? သင်သည်လက်ျာရွေးချယ်မှုစေနိုင်သည်မတိုင်မီဒါဟာအားလုံးဖြစ်နိုင်ချေရွေးချယ်စရာချိန်မှအမှန်ပင်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. သငျသညျတခု All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေစခန်းထဲမှာနေဖို့ဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, အဓိကအများအပြား ဥရောပခရီးစဉ် သငျသညျဖုံးအုပျပါပြီ. သငျသညျဥရောပမှတဆင့်ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, သင်လုပ်နိုင်သည် အတွေ့အကြုံကိုခံစား အကောင်းဆုံးကို All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေစခန်းမှာတည်းခိုရှိရတဲ့၏ အငြိမ့်ရထား. ဒီနေရာတွင်လက်လွတ်မနိုင်ပါတယ်ဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းဖွင့်:
Borgo Egnazia, အီတလီ
ဒါဟာ Puglia အတွက်ဒါပေမဲ့အီတလီနိုင်ငံအပေါငျးတို့သမသာအလှဆုံးအပန်းဖြေတစ်ဦးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဥရောပစဉ်းစားသည်. Borgo Egnazia ဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်. Borgo Egnazia ရိုးရာနှင့်အတူကျက်သရေသင်လိမ့်မည် ဗိသုကာစတိုင် သငျသညျ Puglia ဖြတ်ပြီးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, အဖြစ်က၎င်း၏လှပအလှဆင်အခန်းပေါင်း, ရေကန်, တစ်ဦးဂေါက်ကွင်းများနှင့်အဘို့အပင်လှုပ်ရှားမှုကလပ် ကလေးတွေ နှင့်ဆယ်ကျော်သက်. ရထားBaríသို့မဟုတ် Brindisi ရယူပါပြီးတော့ Savelletri di Fasano သွားရောက်, အဆိုပါတာ သာယာလှပလမ်းကြောင်း Puglia အပေါငျးတို့သအလှအပကြည့်ဖို့.
Brindisi ရထားမှ Naples
Bari ရထားလက်မှတ်တွေမှ Naples
Bari က Fasano မှရထား
Fasano ရထားမှ Naples
အဆိုပါစန်း Pietro di Positano, အီတလီ
အီတလီသို့သွားရောက်ဖို့အများကြီးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သောနေရာများရှိပြီး, ဒါပေမယ့် Amalfi ကမ်းခြေသူတို့ကိုယ်သူတို့အီတလီအကြားတစ်ဦးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်. နှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေစခန်း၏တဦးတည်းရှိမှန်သည်. စန်း Pietro, ယင်း၏နှင့်အတူ 57 အခန်းပေါင်းနှင့် အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော ကမ်းခြေ-side စားသောက်ဆိုင်ကိုသင်သလောက်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ် အဆိုပါဒေသ၏အလှ. သငျသညျ Amalfi ဖို့အနည်းငယ်အမြန်ရထားစီးဘွတ်ကင်နိုင်ပါတယ်, Naples သို့မဟုတ် Salerno ကနေ - ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းမတစ်လျှောက်အမြင်များကိုခံစား.
မီလန်မှ Salerno ရထားလက်မှတ်တွေ
Florence to Salerno ရထားလက်မှတ်တွေ
ဘာရီသို့ Salerno ရထားလက်မှတ်တွေ
ရောမမြို့ Salerno ရထားလက်မှတ်တွေ
ဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေချစ်သော – ကလပ် Med Opio Provence, ပြင်သစ်
သငျသညျဆိုရင် ပြင်သစ်သို့သွားရောက်ခြင်း ကြီးစွာသော All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေနေ, ကြည့်ရှုခြင်းမရှိထပ်မံထက် Provence နှင့်၎င်း၏ကလပ် Med Opio အပန်းဖြေ. သံလွင်အာရှရပင်များနှင့်လာဗင်ဒါလယ်ကွင်းဖြစ်သွားကြသည် သငျသညျကိုစူးစမ်းဖို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ သူတို့ကို, လှပတဲ့ Cote d'Azur အတူ. ကလပ် Med Opio Provence ထောက်ပံ့ အံ့သြဖွယ်အစားအစာ ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အတူ အစားအစာအထူး, အကြီးအအခန်းပေါင်း, နှင့်သင်သို့မဟုတ်အမြိုးသားအများအတွက်လှုပ်ရှားမှုများ၏ပဒေသာ - သင်ပင်မြှားပစ်သင်ခန်းစာတွေယူနိုင်ခဲ့! သင့်အနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤဒေသတွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရနိုင် Ter Provence-Alpes-Cote d'Azur (Ter PACA) ရထားလမ်းကွန်ယက်ကို.
Dijon to Provence ရထားလက်မှတ်တွေ
ပဲရစ်မှ Provence ရထားလက်မှတ်တွေ
Marseilles to Provence ရထားလက်မှတ်
လိုင်ယွန်မှ Provence ရထားလက်မှတ်တွေ
ဟိုတယ် Tannenhof, သြစတြီးယား
သငျသညျပိုနှစ်သက်ပါလျှင် တောင်တပြင်ရှုခင်း အစား sprawling ၏ ကမ်းခြေ, သငျသညျလညျပတျဖို့အတှကျဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေစခန်းများထဲမှသြစတြီးယားရဲ့ရှိစေခြင်းငှါ Tyrolean အဲလ်ပ်တောင်တန်း. ဟိုတယ် Tannenhof ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သောတောင်ပေါ်အမြင်များဂုဏ်ယူ, ထိုသို့တစ်ဦးရဲ့ ကြီးမြတ်နှင်းလျှောစီးဆုတ်ခွာနေ အနည်းငယ်ပိုပြီးပုဂ္ဂလိကလေထုကြိုက်တတ်တဲ့သူများအတွက်. သငျသညျ Innsbruck ရှိထံမှလွယ်ကူစွာ Ischgl ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ဇူးရစ်သို့မဟုတ် မြူးနစ် - ရထား Landeck ရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်, အရာပြီးနောက်အပန်းဖြေကွာတိုတောင်းတဲ့ drive ကိုဖြစ်ပါတယ်.
Landeck Ischgl ရထားမှဗီယင်နာ
မြူးနစ် Landeck Ischgl မှရထား
Salzburg Landeck Ischgl မှရထား
ဇူးရစ် Landeck Ischgl မှရထား
ကော-Resort ကို, ဂျာမနီ
ထဲမှာကော-Resort ကို Bavaria ၏လှပသောဒေသ ဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေစခန်းတို့တွင်, ထိုသို့သောနှင်းလျှောစီး-LIFT နှင့်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးခန်းအဖြစ်သာယာအဆင်ပြေမှုများပေးထံသို့မရောက်ရအထူးသဖြင့်လာသောအခါ.
နှင်းလျှောစီး Brannenburg အတွက်အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, အရာသင်လုပ်နိုင်သည် ရထားကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိ ဘာလင်နှင့်အခြားမြို့များမှ ဂျာမနီ နှင့်ဥရောပ.
မြူးနစ် Brannenburg မှရထား
ဘာလင် Brannenburg မှရထား
ရထား Brannenburg မှ Hanover
ဟမ်းဘတ် Brannenburg မှရထား
သငျသညျဥရောပပူဇော်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးကိုအပန်းဖြေစခန်းအတွက်သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုခံစားလိုပါက, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် အကောင်းဆုံးကိုအပေးအယူ၏အားသာချက်ယူစောစော!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-all-inclusive-resorts-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ru နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / zh-CN ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#All-InclusiveResorts #allinclusive #အပန်းဖြေ #traveleurope europetravel ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
4 ဥရောပမှာတော့မီးရထားခရီးသွား Pre-ခရီးစဉ် Essentials
သင်၏ Self-Discovery ခရီးစဉ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေရာများ
10 Awesome လိင်တူချစ်သူ Friendly ရည်ရွယ်ချက်များ